#Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga: Barcelona ayaa isbedel ku sameysay Mowqifkeedii Matthijs de Ligt - Get Latest News From Horn of Africa
#Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga: Barcelona ayaa isbedel ku sameysay Mowqifkeedii Matthijs de Ligt
Manchester United iyo Barcelona ayaa labadoodaba isha ku haya inay heshiis la soo saxiixdaan Matthijs de Ligt oo ka soo jeeda Ajax, iyadoo 19 jirkaan ay hareereysay xulasho badan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Holland, oo qorsheynaya inuu ku soo bilowdo kulankiisii England ee semi-finalka Koobka Qaramada Yurub ee bisha soo socota, ayaa ku wada in uu soo bandhigofarsamo cajiib ah.
Kooxaha Manchester United iyo Barcelona xidigan diraada uu sarnaa ayaa ka caawiyay Ajax inay ku guuleysato horyaalka Eredivisie – iyo sidoo kale kooxdiisa wareega afraad horyaalka yurub keeno.
Kooxda Barcelona ayaa si gaar ah uga shaqeyeysa arrinta Matthijs de Ligt, maadaama ay wadahadalo muddo dheer ah kula jirtay kooxdiisa iyo ciyaariyahankaba, balse ilaa iyo hadda ma jiraan wax la isku raacay.
Wakiilka xiddigaan (Mino Riola) ayaa isku dayaya inuu lacago badan ka helo heshiiskaan wuxuuna sugayaa hadii ay Balaugrana sare u qaadeyso dalabka ay kasoo gudbisay 19-jirkaan tayada wanaagsan ee durba hogaamiyaha ka noqday kooxdiisa Ajax.
Sida warbixinta lagu sheegay waxaa jiray wadahadalo ka dhacay England kaas oo sheegaya inuu xiddiga dalbaday mushaar dhan 14 Malyan oo Yuuro, waana in ka badan lacagaha ay kooxda difaacaneysa La Liga u diyaarisay.
Waxaa jirta diidmo ka timid maamulka sare ee kooxda taasoo ku aadan dalabka shaqsiga ah uu soo gudbiyay xiddiga, taasna waxaa keenay in kooxda ay heysato dhawr difaac dhexe oo ay ka mid yahiin Gerard Pique, Clement Lenglet, Samuel Umtiti and Jean-Clair Todibo.
Madaxweyne Josep Maria Bartomeu ayaa ah shaqsiga go’aanka ka gaaraya hadii ay lacago badan xiddigaan kaga dalban doonaan Ajax, waxaana lasoo warinayaa in baahida ay kooxda xiddigaan u qabto ay sii fideyso maadaama ay guuldarooyin niyadjab ah kala kulmeen Barcelona & Valencia dhawaan.